Ka iibso Qalabka Qalabka Cagaaran ee Khatarta ah si amaan ah online | AASraw budada cayriin
/blog/Clenbuterol/Ka iibso maadada Clenbuterol Raw-booga internetka si badbaado leh
Posted on 11 / 19 / 2017 by Dr. Patrick Young ku qoray Clenbuterol. Waxay leedahay 4 Comments.
-Waa maxay tahay Clenbuterol Raw Mat
- Saameyntii saamaynta Clembuterol iyo saameynta Clenbuterol
-Sida loo iibso Clenbuterol Raw Material online badbaado
-Waa maxay Qalabka Cagaaran ee Cagaaran?
Clinbuterol ayaa badanaa laga helaa cusbada hydrochloride ama budada xayawaanka ee clenbuterol hydrochloride (budada HCL clinkbuterol). Waxay ku jirtaa budada cad, oo loo isticmaalo walax cayriin ah oo lagu daro daawoyinka u dhigma. Waxay leedahay nolol firfircoon oo saacado ah 68 iyo nus saac oo ah saacadaha 36-39. Awoodda jidhka bini'aadanku waa muddo dheer sidaa daraadeed sababta sababta korodhka tartiib tartiib ah ee qiyaasta qiyaasta qiyaasta loo qoondeeyay ayaa la qorey. Clinbuterol HCL ceeriin ayaa lagu iibiyaa nadiif aan ka yarayn 98%, iyo xasiloonida ugu badan ee 2years. Marka la cuno, ku saabsan 95%% waxaa ka mid ah jirka si baaxad leh.
Clinbuterol HCl Raw Dib u eegida Waxyaabaha:
Magaca: Clinbuterol HCL, Clenbuterol Hydrochloride, Clen
Nooca Molecular: C12H19CI3N2O
Kaydinta Wajiga:2-8 ℃
- Saameynta kedibuterol iyo saameynta dhinaca clenbuterol
Clenbuterol HCL waa borotiiter. Waxaa asal ahaan loogu talagalay daaweynta xanuunka neefsiga sida neefta. Laakiin Clenbuterol aad ayuu caan ugu yahay jir-dhisayaasha, isaga oo ku adkeynaya in uu miisaanka hoos u dhigo oo uu ku caawiyo hagaajinta murqaha. Clen waxaa laga faa'iideystaa dadka jecel inay lumiyaan xaydhka. Clinbuterol wuxuu kor u qaadaa xaddiga garaaca wadnaha iyo heerkulka, sidaas darteed kor u qaadista heerka dheef-shiid kiimikaadka oo keenaya miisaanka. Clinbuterol wuxuu u shaqeeyaa sida wakiilka dib-u-dejinta iyo sida ugu badan ee jidh-dhisayaasha oo jecel inay isticmaalaan clenbuterol.
The waxyeelada soo raaca ee clenbuterol kuwaas oo la arko waa murqaha muruqyada, iyo kuwo kale ayaa ah tufaax, madax xanuun, cadaadis dhiig oo sarreeya, iyo lallabo iyo garaaca wadnaha.
-Waxaad ku iibsan kartaa qalabka "Clenbuterol Raw Materials" online safar
Waxaad awoodi kartaa iibso kumbuyuutarka internetka ama waxaad ka iibsan kartaa qalabka caynsanaanta kumbuyuutarka ee khadka internetka, feejignaan waxaa jira meelo badan oo ka mid ah xayawaanka HCC ee iibka iyo clenbuterol ee iibka ah. Waa in lagu ogaadaa khatarta caafimaad ee aad la kulantid haddii aad iibsato daawada cuntooyinka kiniiniga kediska ah waa inay noqotaa kordhinta nafaqada cunto iyo jimicsi joogto ah. Waa inaad maskaxda ku haysaa si aad ugala hadasho takhtarkaaga sidaa daraadeed wax saameyn ah kuma keento dhaawaca joogtada ah ee caafimaadka. Waa inay noqotaa mid nabdoon in laga faa'iidaysto dawadan muddo gaaban illaa lix bilood oo wareeg ah. Ka dib markii aad dalbatay amar internetka ah oo aad ku iibsan kartid internetka kumbuyuutarka. Iyo haddii aad iibso qalabka elektaroonigga ah ee clenbuterol online, waa lagaa ogaanayaa khatarta nadiifka ah ee aad ku sugan tahay. Waa in aad qeexdid in uu yahay jeermiska qamriga caleenta qoyan oo aan ka yareyn 98%, ma aha oo kaliya wax la mid ah, sida Salbutamol/ albuterol (CAS). 18559-94-9) .Waxaad sameyn kartaa amar yar si loo baaro marka hore, ama iibso alaabta ceeriin-gaaban ee clenbuterol iyo Salbutamol / Albuterol wax lagu barbardhigo isbarbardhiga. Haddii sheyga cayriin ee HCL ah oo kalsooni leh ay ku kalsoon yihiin qalabka caynsanaanta cnetta, waxay moodi doonaan inaanu bixin amar caadi ah ama bixin Walxaha cayriinka salbutamol tusaala lacag la'aan ah ee isbarbardhigga.
Markaad isticmaasho habka maraakiibta, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho toddobaadka 1 ama 10days. Haddii shuruucda dalka ay bixiso ogolaansho inaad isticmaasho clenbuterol, waad isticmaali kartaa si aad u hagaajisid xaaladda jirkaaga. Daawadani waxaa laga heli karaa dukaanka caafimaadka ee ku qoran rijeetada kaliya, laakiin intooda badan bogagga ayaa daawada daawadan oo dhan aduunka u diraya. Sidaas darteed haddii aad dooratid habka online-ka ah ee aad ku iibsaneysid qalabka "clenbuterol", waxaad ubaahantahay inaadan soo qorin warqad dhakhtar. Habka ugu wanaagsan uguna fudud ee lagu iibsado kumbuyuutarka waa internetka. Haddii aad daawada ku heshid internetka, waxaad arki doontaa tiro badan oo website ah oo iibinaya alaabta qiimaha tartanka. Inta badan bogagga waxay kaa caawinayaan inaad iibsato daroogada iyada oo aan wax soo saarin wax daawo ah. Ka iibso clenbuterol internetka waxaa ku jira waxtar badan.
Website-yo badan oo bixiya walxo "chestbuterol" ayaa oggolaanaya dhammaan noocyada lacag bixinta, sida WesternUnion, MoneyGram, Bitcoin, Bank Wire. Laakiin haddii aad ka iibsatid budada dufanka clenbuterol online, waa inaad u sheegtid haddii websaydhku yahay mid dhab ah ama aan. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la baaro haddii ay ku siinayso macaamilo ammaan ah oo aad ku qanacsan tahay inaad bixin doonto macluumaadkaaga. Kontaroolin dhammaan hababka iyo xukunka sida marka aad soo iibsanayso waxyaabo kale oo ka mid ah website-yada markaad rabto inaad gawbuterol ka iibsato. Waa inaad hubisaa inaad isbarbardhigto kharashka ka dhexeeya goobo kala duwan iyo habkan waxaad ka heli kartaa heshiiska ugu wanaagsan. Waxaad la yaabi doontaa inaad aragto in goobo badani ay bixiyaan alaabta ceeriin ah ee clenbuterol qiimaha sarreeya.
Tags: iibso qalabka HCL ee clenbuterol, qalabka HCL ee clenbuterol, Khamrigu
Dr. Patrick Young06 / 24 / 2018 at 8: 50 pm
Doorashada AASraw si aad u iibsato clenbuterol waa go'aanka saxda ah.
im isku day inaad iibsato internetka kumbuyuutarka, maxay tahay ilaha qaddarinta leh?
Dr. Patrick Young06 / 21 / 2018 at 8: 53 pm
OK, faahfaahinta waxaa laguu soo diray email ahaan
Dario06 / 21 / 2018 at 6: 37 am
Waxaan rabaa in aan iibsado henbuterol nadiif ah. Waa maxay qiimaha 1kg.
Anigu waxaan ka imid Argentina, kharajka kharajka ku jira.
Qiyaasta HGH: Sida loo doorto qiyaasta HGH si macquul ah? Oxindrolone High Purity (Anavar) Powder Powder for ragga iyo dumarka
Vikram Parmar on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet